Ukususela kumaxesha amandulo, abantu babekwazi ukugubungela izinto zefenitshala kunye nezipho zokuqala ezivela kwi-rattan, i-cane, i-bamboo kunye nemivini yemifuno. EYurophu, umdiliya wawucingwa njengento ebonakalayo yokwakha. Ukusuka kuso kwakhiwa izindonga, uphahla, zenziwe iikhikhithali nezinto ezininzi.
Imodeli yanamhlanje yezinto eziphathekayo iphefumle amandla amatsha kwiindawo ezihamba phambili. Ngoku oku akusiyo nje ixesha lokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa okonwabisayo, kodwa kunye nomthombo wemali engenayo. Abantu abaninzi bafuna ukuba nekhaya elihle kunye nezinto ezingavamile ezenziwe ngesandla!
Itheknoloji yamanje yokugaya ingenza izitya, izifuba zokuhlobisa kunye neebhokisi.
Inkcubeko yokuluka ihambelana ngqo nembali. Khumbula ibhasikidi yama-mushroom oye wahamba kuyo ama-mushroom. Kumele kube mkhulu, inzima kwaye ingakhathazeki. Oku kubangelwa ukuba abalawuli baseRussia bazama ukwenza izinto ezinkulu, ukubonisa ububanzi bemiphefumlo yabo. Emazweni apho ukuphakama kwakuxabiswa khona, ukutya okunye kunamasiko. Ibhasikiti eyenziwe ngumphathi waseYurophu iya kukhanya, kodwa ihlale ihlale ihlala. Izikolo ezikhethiweyo zokugcoba isinkwa ziLithuania, isi-Estonia nesiLatvia.
ULozopletenie ngumsebenzi othakazelisayo nonomdla. Abaphathi benene bazama ukuloba into engavamile kwaye inomdla. Izinto zokubakhulula zingathathwa kwiindawo eziselunxwemeni zamanzi okanye ngasecaleni lomzila womzila. Yilapho uWillow ekhula khona. Akukufuneka uhambe kwivenkile ekhethekileyo uze uchithe imali. Uqobo ngokwayo linika ithuba lokudala izinto ezintle kwizinto "ezinyawo".
Ukukhethwa kwamasebe kusenokwenzeka ukuba kubhekiswe ngokungundoqo. Inketho efanelekileyo ngumthi ohlwaywayo, nangona kunjalo, akunakwenzeka ukufumana igadi ezinjalo. I-Willow willow inepropati enye enomdla: xa unqumla umthi, ukhawuleza kwaye ukhula ngakumbi! I-Willow kufuneka inqunywe kwiingcambu, kwaye amasebe amatsha aya kukhula ngakumbi kwaye angaphezulu. Ukongezelela, ukuba uziqhelisela izinto zokwenza umsebenzi, uphucula imvelo yendawo. Inomdla kakhulu!
Ukuqokelela kwamasebe omdiliya kuqhutywa entwasahlobo nasekwindla. Amagatsha ekwindla aya kuba nebala elimnandi elimnyama, iintwasahlobo ziya kuhlala zimhlophe. Umbala wemibala ongayisebenzisa emsebenzini wakho. Umdiliya ongcolileyo uya kuba mnyama. Amasebe emilanjeni ayagcinwa iminyaka emininzi, kodwa kungcono ukuhlenga amasebe ngobukhulu bawo kunye nombala ngexesha elilodwa.
Ngaphambi kokudala ubugcisa, umdiliya kufuneka ulungele. Thatha amagqabi amaxesha amade kunye namanqatha uze udibanise emanzini ama-2-4 iiyure. Le "ukutsala emuva" ivumela umdiliya ukuba uthambile kwaye uncede. Kuphela emva koko, unako ukucima amasebe ngokwemivo yakho.
Ngamanye amaxesha, ukuluka, sisebenzisa "iikhephe", ezifumaneka ngokucwangcisa imivini kwimishini ekhethekileyo. Kwimveliso yakho ngoncedo lwamateyipu unokwenza umzekelo oyingqayizivele kunye oyingqayizivele.
Njengazo zonke izinto zokuzilibazisa, ukulukwa kwezonka kubangele ekuphuhliseni imfesane, kuxoxisa kwaye kumncincize umntu.
Unokufunda indlela yokwenza i-lozepeteniya ngokuzimela yincwadi okanye ngokuqhagamshelana nenkosi. Izixhobo eziphambili zokudala iimveliso zezandla zakho. Ukuba ugqiba ukuthengisa izinto kumdiliya, uya kufuna izixhobo ezizodwa, ukuze ube nethuba lokudala nokudala izinto ezingavamile. Izixhobo azifani nezixhobo eziqhelekileyo zasemasimini: i-awl, izikrini, iifowuni, i-clothespins, i-pruners kunye nesixhobo esikhethekileyo sokudibanisa imivini.
Ukufumana inzuzo yangempela kwi-lozo-laying, kungcono ukuba yonke intsapho ibandakanyeke kule nto. Ngoko isantya sokwenza izinto siya kwanda kakhulu. Ukufezekiswa kwemveliso yakho unokufaka isicelo kwiironi ezizodwa. Kodwa khumbula ukuba isitoreji sinesipesenti sokuguqa kwaye into iya kuba yindleko kumthengi ophakathi. Unokwenza ngokwakho, uye kwiimarike kunye neendawo ezizodwa zokuthengisa. Inketho efanelekileyo iya kubambisana kunye nomyili. Uza kusebenza phantsi komyalelo uze wazi kakuhle ukuba imveliso yakho iya kuthenga.
Ukwenza ukucola kungcono kumculo okhethekileyo wokuphumla. Ukusebenza ngezinto eziphathekayo, ukusebenzisana nombane womoya kuzakuba nefuthe elihle kwimpilo yakho, isimo sengqondo kwaye, mhlawumbi, imeko yakho yempahla.
Xa uphendulela uya kuba nexesha elininzi lokukhulula, kodwa ukuzonwabisa ekudaleni into enhle kwaye engaqhelekanga iya kudlulela konke okulindelweyo.
Usuku oluhle lwe-Cosmonautics Day - kwizigaba kunye neempompo, kunye nepencilisi - kubantwana be-3, 4, 5, 6, 7, eklasi ye-3, 4, 5, 6, 7.
Ibhokisi leemidala endala ngezandla zakho kunye nomzekelo
Indlela yokuhlobisa izimbiza zeentyatyambo
Ikhefu kunye neramu kunye neerum
Umtshato othobekileyo ka-Alla Pugacheva noMaxim Galkin bavuya kwiInternet, ividiyo
Ukwandisa i-lymph nodes kubantwana
Cried camembert ushizi
Ukupheka kwezitya nge-asparagus